लामो समयसम्म महिला मित्रताको बारेमा त्यहाँ किंवदंतियों, मजाकहरू र यहाँका वैज्ञानिक लेखहरू लेखिएका छन्। यसको अस्तित्व धेरै पटक साबित भयो र अस्वीकार गरिएको थियो। एक महिला मित्रता हो - यो असामान्य भन्न गाह्रो छ, तर हामी सच्चाइमा पुग्ने प्रयास गर्छौं, सबै प्रविधिहरू र विपत्तिलाई भोग्नु पर्छ।
तथ्य यह है कि बचपन देखि हरेक केटी एक प्रेमिका को खोज गर्न को लागि एस्पिरियर, सजिलै संग व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो ऐतिहासिक रूपमा भयो, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारण। पीढी पीढीबाट, मातृभाषा बाट छोरीलाई जानकारी दिईएको छ कि महिलाहरू एकअर्कासँग समान छन् र उनीहरूलाई सामान्य भाषा पत्ता लगाउन सजिलो छ। के तपाईलाई सम्झना छ तपाईले आफ्नो आमाछोरीमा गुडियामा आफ्नो बचपनमा खेल्नुभयो? किससंग बालबालिका मा पड़ोसी बर्तन मा बैठे? जसको साथ तिनीहरूले पहिलो रोमान्टिक अनुभव साझा गरे? ठीक छ, अवश्य, साथीहरु संग! कसले, कुनै कुरा कसरी साथीको साथीले, फोनमा तपाईंको गुप्त कुरा सुन्नेछ, सल्लाह र अफसोस दिनुहोस्। म के भन्न सक्छु, एक महिलाले महिलालाई आधा शब्दको साथ बुझ्छ, जुन मानिसहरूको बारेमा भन्न सकिँदैन। तिनीहरूका लागि "महिला तर्क" लाई मजाक बुझेको कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो छ। कारण यो हो कि महिलाहरु र पुरुषहरु लाई शुरुआती उमेर देखि अलग गरियो। तिनीहरू भन्छन्, "केटाहरू - दायाँतिर, केटीहरू - बाँयातिर"। र त्यसो थियो।
निस्सन्देह, महिला मित्रताको अस्तित्व परम सत्य होइन। जो जोर देते हो कि त्यहाँ कुनै महिला मित्रता छैन, यसको आफ्नै प्रमाण पनि छ। र यो सबूत पनि धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ। तिनीहरू भन्छन् कि पुरुषले आफ्नो बाटोमा देखा पर्न नसक्ने साथी मित्रता छ। हो, केटी-साथीहरू बढ्दै जान्छन्, गुडियाहरू अलगै राख्छन् र प्रेममा पस्छन्। यो प्राकृतिक (अपरिहार्य पनि) हो र मित्रतालाई चोट लाग्दैन। तर यदि दुई केटीहरू उडाउने वस्तु उही मानिस बन्छ भने, तपाईंले छनौट गर्नु पर्छ। अनि त्यस पछि केटीहरूको मित्रताले प्रश्न गरिरहेको छ। सबैलाई सबै केहि मा हुनु र सधैं मात्र एक हुन चाहन्छ, र च्याम्पियनशिपलाई हराउने अर्थ हो, यसैले हामी हामि केटीहरू धेरै मन पराउँदैनौं।
तथ्य यह है कि महिला मित्रता अवस्थित छैन प्रतिस्पर्धा को लागि तिर्खा साबित भयो, जो कमजोर सेक्स को बीच धेरै विकसित भएको छ। महिलाहरु बीच मित्रता न केवल सहानुभूति मा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगत लाभ मा पनि, जो अक्सर रिश्ते मा सामने आउँछ। तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्न कि तपाइँको सबैभन्दा राम्रो साथीले तपाईंलाई प्रयोग गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि, जब तपाईं उसलाई क्यारियर विकासमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, आँसु र उजुरीका लागि वफादार भगतको रूपमा सेवा गर्नुहुन्छ, मित्रतालाई धम्की दिइदैन। तर चाँडै तपाईंको दु: खीको लक्ष्य जस्तो - प्रेमिकाको पहुँच पुग्छ, तपाईं तिनलाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। बिर्सन कि एक महिला एक बिरालो जस्तो छ - त्यो आफैले हिड्न मन पर्छ।
अर्कोतर्फ, महिला मित्रता मिथक होइन तथ्य यो तथ्य पुरुष मित्रताको विरोधको पुष्टि गर्दछ। केवल महिला र पुरुषहरू विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्। पहिलो भावनात्मक, र दोस्रो - तर्कसंगत, व्यावहारिक। यसले अक्सर उनीहरूलाई सामान्य भाषा फेला पार्नबाट रोक्छ। र, माथि उल्लेखित रूपमा, एक महिलाले बिना कुनै शब्द महिलालाई बुझ्दछ।
साथीको साथ कसरी मित्रता राख्ने?
यस महिला मित्रताका उदाहरणहरू छन्, जब साथीहरूलाई एकअर्काबाट कुनै पनि चीजको आवश्यकता छैन, गर्म संचार, समझ र सहानुभूति को बाहेक। तर यदि तपाईंको मामला मा यो एकदम विपरीत भएको छ, त्यसपछि निराश छैन र सामान्य रूपमा मित्रता को अस्तित्व को स्पष्ट रूप देखि अस्वीकार गर्दछ। सबैभन्दा पहिला, तपाईंलाई हालको परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ र तपाईंको प्रेमिकासँग मित्रता कायम राख्ने बारे सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ, किनकी सबै समय हराएनन्। सायद तपाईं उनको अपमानितामा गलत हुनुहुन्छ।
साथीहरूको झगडाले अक्सर के कारण पत्ता लगाउँदछ र सुलभता को के हो?
यदि तपाइँ एक साथीलाई केहि गरेर अपमानित छ र तपाईंलाई बचाउनुहुन्छ भनेर ध्यान गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि तपाइँलाई तपाइँको व्यवहारको बारेमा सोच्ने सबै भन्दा पहिला। कहिलेकाहीँ पनि असफल छनोट गरिएको शब्दले पनि एक व्यक्तिलाई अपमानित गर्न सक्छ। यदि तपाईंलाई याद छ कि खराबीको कारणले हुन सक्छ, तुरुन्तै आफ्नो प्रेमिकासँग कुरा गर, उसलाई क्षमाको लागि सोध्नुहोस्। त्यो बुझ्न र माफ गर्नुहुनेछ, तर शायद उनको लागि केही समय चाहिन्छ।
झन्डाको कारण एक मानिस हुन सक्छ। के तपाईं आफ्नो जवान मानिसको "प्रेमिका" प्रेमिका हुनुहुन्छ? घन्टी नगर्नुहोस्, तुरुन्त उनीसँग सम्बन्ध तोक्नुहोस्। यो हुन सक्छ कि तिनीहरूले आफ्नो आगामी जन्मदिनबारे छलफल गर्न उपहार उपहारको साथमा वा आश्चर्यको व्यवस्था गर्नका लागि। अनि तपाईं पहिले नै नैप्रिडुभाली जान्नुहुन्छ के थाहा छ। यस परिस्थितिलाई बुझ्न हामीले, हृदयको हृदयमा कुरा गर्न आवश्यक छ, खुल्ला रूपमा हाम्रो संवेदना व्यक्त गर्दछौं, र त्यसपछि सबै कुरा निश्चित हुन सक्नेछ।
यदि तपाईं (वा तपाईंको प्रेमिका) शब्द राख्नुभएन र गल्तीले कसैलाई एक मित्रको गोप्यलाई प्रकट गर्यो, जान्न को लागी तपाईं मात्र सक्नुहुन्छ, लुकाउनुहोस् वा रिश्तेलाई तोक्नुहोस्। तपाईंले स्वीकार गर्नु पर्छ कि तपाईंले केहि गलत गर्नुभयो र क्षमा माग्नु भयो। ईमानदारीसाथ आफ्नो मित्रको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि यो फेरि कहिल्यै हुनेछैन, उसलाई बताउनुहोस् कि तपाईं आफ्नो सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता शब्दहरू सुन्न सधैं राम्रो हुन्छन्। यदि तपाईंको मित्रता बलियो छ र वास्तविक छ भने सबै कुरा बसेर बसाइनेछ।
प्रायः साथीहरूको बीचमा एक झगडाको कारण एक ट्राफिक हो, बिल्कुल ध्यानको योग्य छैन। मुख्य कुरा बढ्दै गएको देखि असहमति रोक्न हो। मेलमिलापको लागि पहिलो चरण लिन डराउनुहोस्, र अचानक तपाईं स्टेरिडियोोटाइपहरू र अन्य मान्छेका विचारहरूको लागि पहिचान गर्न एक वास्तविक मित्रता द्वारा पारित हुनेछौं।
महिलाहरु विरुद्ध घरेलु हिंसा
एक आदर्श पत्नी कसरी बन्न सक्छ?
एकजना मानिसलाई विचारको बलद्वारा दूरीमा कसरी विचार गर्ने?
जहाँ माया गरिन्छ - तपाईंको सम्बन्धको5परिदृश्य
ईर्ष्यालाई कसरी हटाउन सकिन्छ?
कसरी आफ्नो पतिको साथ प्रेममा पुन: पतन गर्ने?
आनुवंशिक वजन को लागि आंतों को लागि स्क्रैब
प्रेसको लागि व्हीलसँग व्यायाम गर्नुहोस्
1 वर्षमा बच्चालाई कसरी खानपान?
स्क्रैचबाट कसरी बच्चाको नाक खोल्ने?
शार्क फट - लाभ र हर्म
कसरी इन्टरनेट ढोका स्थापना गर्ने?
गृहमा हातको लागि व्यायाम गर्दछ
कमाईका लागि विचारहरू
खराब मेमोरी, के गर्ने?
कोटीहरुको लागि बेंच
कम मुटुको दर - के गर्ने?
महिला क्लासिकल शैली शैली
Decembrist - cuttings द्वारा प्रजनन
स्ट्राबेरीमा रातो पातहरू - कारण
Esophageal क्यान्सर - सबैलाई थाहा छ कि सबै लक्षणहरू बारे जान्नुपर्दछ
रातो थ्रेडको तामाङ कसरी बनाउने?
क्रीम सॉस:7मूल व्यञ्जनहरु
स्प्रिंगमा काट्टिङ द्वारा ट्यूजाको पुनरुत्थान
कोचेला त्यो उत्सवको चरण अल्पसंख्यक अम्ब्रोसियोको छोरी द्वारा गरियो